I-China Men High Quality Isitolo esidayisa impahla ephrintiwe esifubeni ngeKangaroo Pocket Manufacture and Factory | Indwangu Yezindwangu
I-Sweatshirt yokuphrinta yesifuba yabesilisa esezingeni eliphakeme ngePocket Kangaroo
IGAMA LOMKHIQIZO: I-Sweatshirt yokuphrinta yesifuba yabesilisa esezingeni eliphakeme ngePocket Kangaroo
INOMBOLO YESIQEPHU: MH2021001
IGAMA LOMKHIQIZO I-Sweatshirt yokuphrinta yesifuba yabesilisa esezingeni eliphakeme ngePocket Kangaroo
INOMBOLO YESIQEPHU UMH2021001
IDizayini IKHANGAROO IPHOKHODI, Ukuphrinta kwesifubaUlwelwesi lwesifizo
Ikhola Ikhola enekhanda
Ichweba Shanghai, Ningbo, Shen zhen njll
Ukuhlelwa kwesampula Isampula elungele.Ngokushesha hlela ukuthunyelwa.Isampula yangokwezifiso. Kungakapheli izinsuku ezingu-5-10 zokusebenza. Izindleko zesampula zikhokhiswa ikakhulukazi ngokususelwa kumklamo kanye nenani eliphelele. Izindleko zesampula zingabuyiselwa imali uma nje inani le-oda eliningi lingafinyelela ku-moq yethu.
Izinzuzo ngokukhetha inkampani yethu I-MOQ engezansiIntengo yokuncintisanaUmsebenzi omuhle kakhuluIsiqinisekiso sekhwalithiIsitshalo esinempahla enhle, ukusebenzisana okuqinile kokuthengisa kanye nabasebenzi abanolwazi abanolwazi. Isikhathi esifushane sokukhiqiza.Ukulethwa okusheshayo
Kuhle ngemuva kwensizakalo yokuthengisa
Sineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sobungcweti njengomkhiqizi wezicelo zokuluka zowesilisa nowesifazane. Sineqembu elinamandla lokucwaninga nokuthuthukisa ukuxazulula inkingaKunabahlinzeki abaningi bezinto zokusetshenziswa ezungeze imboni yethuImboni yethu ithole isitifiketi se-WRAP, sinendawo yethu yokusebenzela engaphezu kwamamitha ayi-20000sqAma-oda wesivivinyo amancane angamukelwa, isampula yamahhala iyatholakala. Intengo yethu inengqondo futhi igcina ikhwalithi ephezulu kuwo wonke amaklayenti
I-sweatshirt efake imfashini ngeminyaka yama-1980s yiyona evame kakhulu empilweni yesimanje yabantu, futhi futhi iba nezingubo ezibalulekile zezingubo zabesilisa. Mayelana nokusebenziseka, ukuhambisana nesikhathi kanye nemfashini, iPullover ehlanganiswe kakhulu nezidingo zabathengi, kugqanyisiwe ekwakhiweni kwemikhiqizo yanamuhla emikhulu maqondana nokunemba, ukubukeka, indwangu nephethini. Ngomklamo we-hood ungenye yesitayela esivame kakhulu sezingubo zokuhlanzeka. Ekukhetheni umbala wezingubo nombala wephethini, kubuye kuthambekele ekukhanyeni kombala noma kokungafani kombala, okwandisa umthelela wokubuka. Iveza izingubo ezincane nezilinganayo. Ukushintshwa kwamaphethini bekulokhu kuyisikhundla esibaluleke kakhulu sokukhishwa kwamasiko. I-Brand logo, noma i-graffiti enehaba noma ukwakheka kwembali nezilwane, konke kuveza isimo semfashini sobuntu.Lo mkhiqizo uhumusha ubuncane besimanje obulokhu bunamathela ekwakhiweni ngokusebenzisa isudi yokushaya ehambelana nombala, ijazi lesudi evamile neminye imikhiqizo eyodwa, futhi uletha izinqumo eziningi ezintsha kubantu abathanda isitayela sokungcebeleka emadolobheni. Idizayini ye-kangaroo ephaketheni inyusa ukusebenza kwengubo. Ngokuya ngombala, umbala okhanyayo nombala omnyama kusetshenziselwa ukufanisa umbala, ukwenza isitayela sonke sibe sincane futhi sibe namandla. Iletha izinqumo eziningi ezintsha kubantu abathanda isitayela sokuphumula sasemadolobheni.Sekuyinto yethrendi engakwazi ukunakwa. iphethini yokunyathelisa isifuba idonsa iso. Isitayela sehembe esinobumnene besilisa sakha umqondo oqinile wemfashini. Idizayini ejwayelekile yezingubo zekhanda idala umuzwa oqinile wokuhamba. Imidlalo yokugqoka engezansi ukusetha ukugqoka okuphezulu. Isithombe esiphelele sale Pullover yamadoda sizonikeza isitayela sakho nobuntu bakho.
Langaphambilini I-Fleece Zipper up Sweatshirt Yamadoda ene-Stand Collar Sweater
Olandelayo: I-OEM Men's Crewneck Blank Pullover Sweatshirt Umkhiqizi Wezemidlalo Amaswidi
Isitolo esidayisa yonke impahla High Quality Autumn an ​​...